Mudane Maxamed Qanyare Afrax oo la soo baxay isbedel cusub oo uu kaga tanaasulayo qodobadii uu uga soo horjeedey Col. C/llahi Yusuf iyo magaalo madaxnimada Muqdisho.
Buluugleey, February 1, 2006
Qanyare ayaa wuxuu ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho ee la galay heshiis hoosaadka Col. C/llahi Yusuf sidaasna ugu codeeyey doorashadii madaxtinimadiisa. Balamihii oo waxba ay ka socon waayeen awgeed, ayaa labadaas hogaamiye waxaa u dhexeysey wakhti dheer colaad iyo dagaal ninba ninka kale uu ka cuuryaaminayo dhinaca dhaqaalaha iyo aragtida caalamka.
Col. C/llahi Yusuf ayaa hadda waxaa muuqata inuu doonayo in uu dib ugu noqdo balanqaadyadii iyo heshiisyadii kala dhexeeyey Qanyare waa haddii uu Qanyare ka soo haro kooxaha mucaardka ee ka jira Muqdisho.
Qanyare ayaa daneynaya inuu buuxiyo kaalinta ay baneynayaan Prof. Geeddi iyo Maxamed Dheere. Wuxuuna isku diyaarinaya inuu dowlada ka dhaadhiciyo iney soo degaan degmada Dayniile, amaankoodana uu isagu sugayo.
Qanyare ayaa markaan u muuqda mid doonaya inuu ka tanaasulo Muqdisho iney noqoto meesha ay dowladu degto iyo ciidamada safka hore inaan la keenin Soomaaliya. Haddii labadaas qodob oo ah mabda’ ugu weyn ee uu uga soo horjeedey C/llahi uu ka tanaasulo, wuxuu noqonayaa hogaamiyaha ugu horeeya ee reer Muqdisho oo ku siyaasad noqda C/llahi heshiiskii Cadan ka dib. Waxaa sidoo kale laga yaaba inuu meel marinta siyaasadaas uu ku helo dhaqaale iyo hub uga yimaada dhinaca Itoobiya, sidoo kale waxaa macquula inuu helo balanqaadyo jagooyinka sare ee dowlada iyo in maleeshiyadiisa ay ka badbaadeyso duulanka Itoobiya ay la damacsan tahay Muqdisho.